महिलाहरू किन पुरुषलाई अस्वीकार गर्छन् ? | साहित्यपोस्ट
महिलाहरू अति संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरू पुरुषहरूको तुलनामा धेरै नै भावनात्मक हुन्छन् । सम्बन्धमा स्वीकृति जनाउनुभन्दा अगाडि व्यक्तिगत अनुभूति र बुझाइलाई बढी महत्त्व दिन्छन् । उनीहरू स्वयं आफूहरू कुनै पनि पुरुषको लागि उपयुक्त हुने वा नहुनेबारे, पुरुषहरू पनि आफ्नो लागि उपयुक्त हुने वा नहुनेबारे प्रस्ट रुपमा अनुभूत, बुझ्न सक्छन् ।
प्रकाश जंग थापा	 प्रकाशित ३ असार २०७९ १६:१३
प्रेम सम्बन्धको अध्याय सुरुवात गर्ने क्रममा, बिहेका कुराहरु अगाडि बढाउने क्रममा महिलाहरुबाट ‘नो’ आउनु वा अस्वीकार प्राप्त हुनु सामान्य कुरा हो। र, यसलाई सामान्य रुपमा नै लिन सक्नुपर्छ। यद्यपि अधिकांश पुरुषहरु अस्वीकृतिलाई सहज रुपमा लिन सक्दैनन्, आत्मसात गर्न सक्दैनन्। स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा, उनीहरुलाई अस्वीकृतिको पीडा सहन निकै कठिन हुन्छ। सो अवस्था सिर्जना हुनुमा उनीहरु महिलाहरुबाट अपमानित भएको सम्म ठान्छन्। अनि महिलाहरूको सिधा अस्वीकारलाई व्यक्तिगत रुपमा लिन्छन्। यतिमात्र होइन, आवेगमा महिलाहरुप्रति अनावश्यक नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरु गर्नुका साथै चरित्र हत्या समेत गर्न पुग्छन्। एउटी महिलाबाट अस्वीकृत हुनुपर्दाका विविध कारणहरू केलाउन थाल्छन्। प्रायः उनीहरु महिलाहरूको भाउ बढेको, महिलाहरु प्रेम भन्दा पैसाको पछि लाग्ने, अत्याधुनिक सुखसुविधा खोज्ने, आफूलाई मन नपराएको, असंवेदनशील भएका जस्ता कारणहरू अनुमान गर्छन्। उनीहरु जतिपनि यस्ता कारणहरू प्रस्तुत गर्छन्, त्यसमा पूर्ण सत्यता भने हुँदैन। आखिर पुरुषहरु किन महिलाहरुको बेवास्ताको सूचीमा समाहित हुन पुग्छन्। अझ यसो भनौँ, उनीहरु किन महिलाहरुबाट सजिलै अस्वीकृत हुन पुग्छन्?
कुनै पनि पुरुष महिलाहरुबाट अस्वीकृत हुनुका पछाडि निम्न कारणहरू रहेका छन्:
महिलाहरू अति संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरू पुरुषहरूको तुलनामा धेरै नै भावनात्मक हुन्छन् । सम्बन्धमा स्वीकृति जनाउनुभन्दा अगाडि व्यक्तिगत अनुभूति र बुझाइलाई बढी महत्त्व दिन्छन् । उनीहरू स्वयं आफूहरू कुनै पनि पुरुषको लागि उपयुक्त हुने वा नहुनेबारे, पुरुषहरू पनि आफ्नो लागि उपयुक्त हुने वा नहुनेबारे प्रस्ट रुपमा अनुभूत, बुझ्न सक्छन् । तर यसको ठीक विपरीत पुरुषहरु तर्किक हुन्छन्। उनीहरुको लागि भावना, अनुभूति र बुझाइ जस्ता कुराहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्। उनीहरुसँग एकले अर्कालाई अनुभूत गर्ने गराउने र बुझ्ने बुझाउने समय, रुचि नै हुँदैन। महिलाहरूको केवल शारीरिक बनावट र सुन्दरताकै आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न तत्पर रहन्छन्। सम्बन्ध स्थापित गर्ने सिलसिलामा उनीहरु म आकर्षक छु, म आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित छु, आर्थिक र सामाजिक स्तर मजबुत छ, मुख्यतः म उनीलाई माया गर्छु, त्यसकारण उनी मेरी हुनै पर्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु गर्छन्। यी तर्कहरु प्रभावहीन छन्। यस्ता तर्कसंगत कुराहरुले महिलाहरूमा भावना जागृत गराउन सकिँदैन। अनुभूति र बुझाइको स्तर बढाउन सकिँदैन। परिणामस्वरूप उनीहरुले मन नपरेर होइन, बुझाइ एवं अनुभूतिको अभावमा सम्पूर्ण पुरुषहरुलाई निसङ्कोच अस्वीकृत गरिदिन्छन्।
स्तर एवं अपेक्षा नमिल्नु
पुरुषहरुले मात्र होइन, महिलाहरुले पनि निश्चित मानक तय गरेका हुन्छन्। हुनेवाला प्रेमी वा श्रीमान् यो स्तरको होस्, यो स्तरभन्दा तलको नहोस् भन्ने आदर्श चित्र मस्तिष्कमा राखेका हुन्छन्। त्यो स्तरको पुरुष नभेटेसम्म प्रेम सम्बन्ध र बिहेमा कुनै चासो राख्दैनन्। त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। जति नै धेरै पुरुषहरुले जतिसुकै जोडबल लगाएतापनि, जति नै पटक प्रस्ताव पेश गरेतापनि परिकल्पित स्तर मिलेन भने, त्यस प्रस्तावलाई एकछिन नसोची सिधा लत्याइदिन्छन्। कुनैपनि किसिमको सम्झौता गर्न तयार हुँदैनन्। यसलाई यसरी बुझ्ने कोसिस गरौँ। मानौँ तपाईं एक संघर्षरत युवा हुनुहुन्छ। मानौँ तपाईंले एउटी स्थापित महिलालाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभयो। यस्तोमा ती महिला तपाईंप्रति कुनैपनि हालतमा आकर्षित हुन सक्दिनन्। कारण? त्यहाँ तपाईं र महिलाको स्तर मिलेको हुँदैन। कहाँ तपाईं भुइँमान्छे, कहाँ उनी स्तरीय महिला। ती महिलाको निम्ति तपाईं केही खास देखिनु हुन्न। अनि स्वतः अस्वीकृत हुन पुग्नुहुन्छ।
त्यसेगरी महिलाहरुले पुरुषहरुबाट केही कुराहरुको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। केही आवश्यकताहरु परिपूर्ति होस् भन्ने चाहेका हुन्छन्। यी अपेक्षाहरू, आवश्यकताहरु महिलाअनुसार फरक पर्न सक्छन्। सामान्यतः महिलाहरु पुरुषहरुबाट प्रेम, सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा, भावनात्मक र शारीरिक निकटका चाहन्छन्। यस अतिरिक्त पुरुषहरु विनोदपूर्ण, निडर र आत्म-विश्वासी हुन् भन्ने चाहन्छन्। यी यावत् अपेक्षाहरू, आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका आदर्श पुरुष नभेटुन्जेल उनीहरु पुरुषहरुलाई लगातार, निरन्तर अस्वीकृत गरिरहन्छन्।
मानिसहरू किन क्रेजी हुन्छन् ?
प्रकाश जंग थापा	 २४ मंसिर २०७८ १७:०१
महत्त्वाकाङ्क्षा कसरी पूरा गर्ने ?
प्रकाश जंग थापा	 १५ आश्विन २०७८ १५:०१
प्रकाश जंग थापा	 २२ श्रावण २०७८ १५:३१
आकर्षक महिलाहरुहरुसँग प्रेम सम्बन्ध जोड्न चाहनेहरु धेरै हुन्छन्। अर्थात् उनीहरुलाई प्रेम र सम्बन्धको मामिलामा असीमित विकल्पहरू उपलब्ध हुन्छन्। त्यो पनि सजिलै। यो कुरा बुझ्न टाढा जानै पर्दैन। कुनै ठूलो कष्ट गर्नै पर्दैन। उनीहरुले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टमा आउने प्रतिक्रियाहरु हेरे पुग्छ। एक हिसाबले उनीहरुको लागि त लाइक, लभ र कमेन्टहरुको वर्षा नै हुन्छ। त्यसमाथि उनीहरुलाई इन्स्टाग्राममा डिएम गर्ने, फेसबुकमा म्यासेज गर्ने, एप्रोज गर्ने (प्रस्ताव राख्ने) परिचित तथा अपरिचित अनुहारहरुको घुइँचो नै लाग्छ। यस्ता नमुनाहरुप्रति महिलाहरु कहिल्यै आकर्षित हुन सक्दैनन्। स्वीकृत हुने त झन् सम्भावना नै रहँदैन। त्यसैगरी उनीहरु बेचैन हुनुका साथसाथै दिग्भ्रमित हुन पुग्छन्। यस्तोमा कुन पुरुषलाई छनोट गर्ने र कसलाई अस्वीकार गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन सक्दैनन्। यसै क्रममा प्रायः पुरुषहरु महिलाहरुबाट अस्वीकृत हुन पुग्छन्। त्यसैगरी महिलाहरु सम्पूर्ण विकल्पहरू समान रुपमा केलाउन, जाँच्न र गहिरोसँग बुझ्न चाहन्छन्। उनीहरु सुरुवाती चरणमै उपलब्ध हुने प्रेम र सम्बन्धको पहिलो विकल्पलाई नै अन्तिम विकल्प मानेर स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन्। उनीहरु थप विकल्पहरू खोजी गर्न र त्यसबारे गहन विचारविमर्श गर्न चाहन्छन्। अझै उत्कृष्ट विकल्पहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। जसकारण पहिलो विकल्प बन्न पुगेका पुरुषहरु होलसेलमा (एकमुष्ट) अस्वीकृत हुन पुग्छन्।
प्रेम र सम्बन्धको लागि मरिहत्ते गर्ने, आशक्ति राख्ने, उच्च स्वमित्ववाची भाव व्यक्त गर्ने, अस्वभाविक लगाव देखाउने पुरुषहरुप्रति महिलाहरु कहिल्यै आकर्षित हुन सक्दैनन्। यद्यपि अधिकांश पुरुषहरु महिलाहरुमा विकर्षण पैदा गराउने कार्यहरु मात्र गर्न तल्लिन हुन्छन्। उनीहरु आफ्नो आत्म-स्वाभिमान, महत्व भुलेर महिलाहरुप्रति लिप्त हुन पुग्छन्। एकछिन पनि अलग हुनेबारे सोच्न सक्दैनन्। अनुपस्थितिको शक्ति कति हुन्छ र त्यसलाई सम्बन्ध निर्माणमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कत्तिपनि हेक्का राख्दैनन्। आकर्षक, कामुक महिलाहरु देख्ने वित्तिकै पछि लाग्न थाल्छन्। सामाजिक सञ्जालमा जोडिने प्रयत्न गर्छन्। ती महिलाहरुले एउटा फोटो पोस्ट गर्न नपाउँदै लाइक, कमेन्टहरुको लहर ल्याउँछन्। हरेक दिन जसो कुनैपनि समय म्यासेज गर्छन्, हालखबर बुझ्छन्। कुनै विशेष समय आउनु हुन्न शुभकामना दिन आतुर हुन्छन्। उनीहरुको चाहना र स्वीकृति विपरीत निकटता झल्काउने कोसिस गर्छन्। व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दैनन्। यस्ता गतिविधिहरू कारण उनीहरुको पुरुषहरुप्रतिको आकर्षण घट्दै जान्छ। जसकारण उनीहरु त्यस्ता आशक्त पुरुषहरुलाई बिना हिच्किचाहट अस्वीकार गरिदिन्छन्।
अहिलेको जमानामा महिलाहरुको विगत हुनु अथवा भुतपूर्व प्रेमी हुनु अस्वाभाविक होइन। उनीहरु पुरुषहरुले जस्तो चाँडै विगत भुल्न सक्दैनन्। उनीहरुलाई एउटा तीतो अतित भुल्न पनि वर्षौँ सम्म लाग्न सक्छ र जीवनमा नयाँ बाटो समाउन सक्दैनन्। यसमाथि कुनै पनि पुरुषलाई विगत भुलाउने माध्यमको रुपमा सोच्न, प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। यस्तोमा प्रेम प्रस्ताव अगाडि बढाउने जो कोही पुरुष अस्वीकृत हुन पुग्छन्। त्यसैगरी महिलाहरु विगत भुलाउने पुरुष होइन, विगतलाई सहर्ष स्वीकार र सम्मान गर्ने पुरुष चाहन्छन्। आफ्नो विगतबारे नकारात्मक धारणा राख्ने, सोही आधारमा आफूलाई मूल्यांकन गर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रकृतिका पुरुषहरुलाई त्यति रुचाउँदैनन्। त्यसैले आफू लगायत विगतलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार्ने पुरुष नभेटेसम्म जस्तोसुकै योग्य र स्तरीय पुरुषलाई बेवास्ता वा रिजेक्ट गर्न समय लगाउँदैनन्।
आफ्नै संसारमा हराउनु
सबै महिलाहरु पारिवारिक तथा श्रीमती विशेषताका हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। उनीहरु आफ्नै संसारमा हराएका हुन सक्छन्। हेडोनिस्टिक जीवनशैली (सुखवाद) मा रमाइरहेका हुन सक्छन्। भनाइको तात्पर्य, उनीहरु रमाइलोका लागि नै देशविदेश भ्रमण गरिरहने, रात्रिकालीन जीवन बिताउने, शारीरिक आनन्दमा लीन हुने, उस्तै परे यौन पार्टनर परिवर्तन गरिरहने खालका हुन सक्छन्। अब यस्ता आनीबानी, मनोवृत्ति र प्रवृत्तिका महिलाहरुलाई रुढिवादी पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका एक सरल, इमान्दार र निष्ठावान पुरुषले प्रेम वा बिहेका लागि प्रस्ताव राखे के होला? यस्तोमा दुई सम्भावनाहरु खुला हुन सक्छन्। एक, उनीहरु सुखवादमै रमाउन चाहेका कारण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसिने डरका कारण ती पुरुषलाई रिजेक्ट गरिदिन्छन्। दुई, उनीहरुले ती पुरुषलाई स्वीकार गरेर बिहे गर्नु गलत कदम भएको र धोका दिन गइरहेको ठान्छन्। ती पुरुषले आफू सुहाँउदो धेरै महिलाहरु पाउन सक्ने र केहीजानी ती पुरुषसँग एक हुन पुगे पछि आत्म-ग्लानी महसुस हुने सोच्छन्। अनि अन्ततः ती पुरुषलाई अस्वीकार गरिदिन्छन्।
३ असार २०७९ १६:१३
प्रेम-सम्बन्धमा असफल हुनुभयाे ? यसरी गर्नुहोस् प्रेमभावको सञ्चार ...